Ngenisa umfanekiso weGoogle Earth kwisakhiwo se-ecw - Geofumed
NgoJanuwari, 2012 Iiphotography, Google umhlaba / imephu, Microstation-Bentley
Isidingo: Sisebenza kwi-cadastre esebenzisa umfanekiso weGoogle Earth kwifomati ye-georeferenced engacacanga.
Ingxaki: I-ortho ehlisa i-Stitchmaps ephantsi kwi-jpg format, i-georeferenti ezayo ayixhaswanga yi-Microstation.
Isisombululo: Khuphela umzobo ngeStchmaps, uvumelanise iGoogle Earth kunye ne-Microstation ukuba ungenise i-georeferenced capture and warp.
Thina abanomdla ECW kuba libambe fayile georeference ezongeziweyo nalapho HMR okanye TIFF 200 12 nje ebunzima MB MB ngaphandle kokulahlekelwa umgangatho kakhulu. Thina StitchMaps kunye Microstation PowerMap V8i, ukuba oko niya kukwenza oku nangona ezinye iinkqubo inokwenziwa kunye ezimbalwa.
Makhe sibone indlela eyenziwe ngayo:
1. Umfanekiso wokukhuphela.
Senze oku Iziqu, njengoko sele sichaziwe ngaphambili. Ngaphandle koko, sitsalane itekane kwiGoogle Earth, ukuze ifakwe ekuthinjweni kwemifanekiso.
KuGoogle Earth oku kwenziwa ngayo Yongeza> iPolygon, kwaye ngesitayela sikhetha umgca kunye nomgca we-1.4 emhlophe. Oku siya kwenza njalo, kuba i-Microstation ayikwazi ukungenisa ifayile ye-kml kule nguqulelo, ngaphandle kwe-FME esuka kwi-Bentley Imephu. Kodwa inguqulelo Powermap ayifaki lo msebenzi, ngoko ukudala udangxube kuya kufuneka ukuba senze ngokudweba kumfanekiso.
2. Yakha i-georeferenced dgn.
Oku kudalwa ngokwenza Ifayile> Entsha, kwaye sikhethe imbewu iMbewu3D. Ukungenisa kwe-Google Earth umfanekiso awusebenzi kwifayile ye-2D.
Emva koko simele songeze i-georeference kwifayile, eyenziwa nge: Izixhobo> IiGraphics> Khetha I-System Coordinate
Kwiphaneli esiyikhethayo KwiThala leencwadi, kwaye ukususela ngeli xesha sinomdla kwi-UTM 16 North, sikhetha:
Ithala leencwadi> Iprojekthi> Ihlabathi (UTM)> WGS84> UTM84-16N
Ukuba le yinkqubo esisebenzisa kakhulu, sinokunqakraza ngokukhawuleza kwaye singeze kwiintandokazi, ukuze sikwazi ukufikelela ngokulula. Senza OK kwaye sele ifufayile yethu ibheteleferenced.
3. Thatha umfanekiso weGoogle Earth
Ukuvumelanisa i-Microstation neGoogle Earth esenzayo Izixhobo> IiGografia> landela i-Google Earth View. Ngale ndlela, imbono yethu ibonisa nje oko kuGoogle Earth. Kukulungele ukuba kubekho ukuhlaziywa ngasenyakatho apho kunye nendlela efanelekileyo.
Ukungenisa umfanekiso owenzayo Izixhobo> Geographics> Thatha umfanekiso weGoogle Earth, sicofa kwisikrini uze sigqibe ukuthunyelwa. Into esinayo ayikho umfanekiso, kodwa imodeli yendawo yedatha, ngomfanekiso njengepropati yezihlangu.
Ukubona umfanekiso, senza ukunikezelwa. Ukuze ungabi nxamnye apho iifayile zinikezela, ndiya kuyenza ngokusebenzisa umyalelo wombhalo. Izixhobo> eziphambili kwi> zenze zonke zigqithise. Qaphela ukuba kukho ibhokisi elithandayo. Loo mfanekiso, nangona isisombululo esifanelekileyo sisigxina.
4. Ukufakela i-Georeferencing umfanekiso
Kule nto, okokuqala, siya kwenza amaphuzu kumacandelo omfanekiso we georeferenced. Oku kuyenziwe ngomyalelo weengongoma, siya kubafaka ngokuluhlaza, kunye nobukhulu bommeli kunye nendlela efanelekileyo njengokuba ikhoneni lexande libonakala. Ukuba silahlekelwa ngumfanekiso, senza umyalelo wokubuyisela kwakhona, kwaye ungakhathazeki malunga nokuba kunjalo, khumbula ukuba ukuchaneka kweGoogle Earth Kubi kunokuba silahlekelwe apha.
Emva kokuba amaphuzu enziwe, sifaka umfanekiso we-jpg esiwulandileyo ngeStchmaps: Ifayile> Umphathi weRaster, ngoko kwiphaneli esiyikhethayo Ifayile> fakela> Raster. Masingalibali ukushiya ukhetho olusebenzayo Beka phakathi, kuba siya kufaka ngesandla.
Sifaka ngaphakathi kwebhokisi yomfanekiso oluhlaza, ukuze sikwazi ukuyolulela ukusuka apho.
Ngendlela efanayo, senza amaphuzu kumacangca yecatane esesithombeni sombala. Ezi ziya kwenziwa ngokubomvu ukubona ukuhluka.
Ekugqibeleni sifanele sibe nento enje:
Ukwelula umfanekiso, ukusuka kwiPaneli yoMphathi weRaster, ngokukhawuleza ukchofoza kumfanekiso, sikhetha Warp, ngendlela Affine ezingaphezulu kweenombolo ze-3. Emva koko sikhetha nganye ikona, ebonisa indawo yokuvela (obomvu) kwindawo ekuya kuyo (eluhlaza) kwaye xa ezine zenzeke iqhosha le mouse elifanelekileyo.
5. Guqula umfanekiso ukusuka kwi-jpg ukuya kwi-ecw
Ukulungele, ngoku iphepha lethu le-jpg liyi-georeferenced. Ukuyigcina kwelinye ifomathi, khetha it, nqakraza ngakwesokudla uze ukhethe gcina njenge. Sinokukhetha phakathi kwamafomathi amaninzi, kuquka okubalulekileyo ecw ezingenayo iinguqulelo ze-Microstation.
Kwaye ekugqibeleni sinezinto esizidingayo, i-raster 24 MB ngobukhulu, kunye nebhokisi yomdla wethu weemitha ezili-1225 kwicala, lilungele ukusebenza.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ulawulo lolwazi, ihlabathi litshintshile
Post Next Iindaba ze-2 kwingingqi ye-geospatial ongenakuyihoyaOkulandelayo "
Enye Impendulo "Yongenisa umfanekiso weGoogle emhlabeni kwisakhiwo se-ecw"